Sacuudiga oo Daldalay Dad Shiica Ah iyo Dowladda iiraan oo Cambaaraysay.
Wednesday December 07, 2016 - 12:02:53 in Wararka by Super Admin
War rasmi ah oo kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda iiraan ayaa lagu cambaareeyay xukuno daldalaad ah oo dowladda Sacuudiga ku fulisay dad shiico iiraan xiriir lalahaa.
cilaaqaadka Aala Sacuud iyo iiraan ayaa sii xumaanaya
Maxkamad ku taalla magaalada Al-Riyaad ee caasimadda maamulka Sacuudiga ayaa xukun toogasho ah ku riday Tobaneeyo Ruux, kuwaas oo ay ku eedeysay iney basaas u ahaayeen dowladda shiicada Iiraan.
Aala-Sucuud ayaa dadkan la xukumay oo tiradoodu gaareyso 30 Ruux waxay ku eedayeen iney damacsanaayeen howlgelinta unug jawaasiis ah oo u shaqeysa Sirdoonka Iiraan.
Balse dadka xukunka daldalaadda ah lagu riday ayaa gaaraya 15 ruux oo dhammaantood ahaa Basaasiin shirqoollo umaleegayay qoyska reer Boqor ee talada dowladda sacuudiga haaya sida lagu sheegay warka kasoo baxay sacuudiga.
Sida ay sheegayaan Warbaahinta, waxaa raggan gacanta lagu dhigay sanadkii 2013 waxaana markaas lagu eedayay iney u shaqeeyaan Sirdoonka Iiraan, iyadoona dacwadooda ay saddex sano oo xiriir ah soo jiitameysay.
Sodonka Ruux ee la xukumay ayaa waxay kasoo kala jeedaan Xaramaynka, Afqaanistaan iyo weliba dalka Iiraan.
Dowladda iiraan waxay ku eedaysay sacuudiga in si gaar ah ay u ciqaabayso dadka shiicada ee gudaha Sacuudiga looga tira badanyahay, cilaaqaadka u dhaxeeya labada dowladood ayaa sii xumaaday kadib markii sacuudigu ay daldalaad ku fuliyeen wadaad shiici ah oo lagu magacaabi jiray Namar Al-namar kaasi oo kasoo jeedo shiicada aqaliyaatka ah ee dhulka xarameynka ku noolaa.